नेपाली खेलकुद कहिले फर्केला मैदानमा, अबको खेलकुद कस्तो होला? | Nepal123.com
Posted in खेलकुद, खेलकुद प्रमुख, रंगशाला, रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय समाचार
नेपाली खेलकुद कहिले फर्केला मैदानमा, अबको खेलकुद कस्तो होला?
Author: Binod Dhakal Published Date: May 23, 2020 LeaveaComment on नेपाली खेलकुद कहिले फर्केला मैदानमा, अबको खेलकुद कस्तो होला?
१० जेठ, काठमाडौं । कसैले सोचेका थिएनन् होला यति लामो समय लकडाउन हुन्छ अनि घरबाहिर निस्कन पाइँदैन भनेर । तर कोरोना भाइरसको महामारी रोक्न लगाइएको लकडाउन दुई महिना पूरा भइसक्यो । नेपाली खेल गतिविधि सबै ठप्प छ । न प्रतियोगिता भएका छन्, न खेलाडीको प्रशिक्षण नै ।
खेलाडीले केही दिन हो घरमै वर्कआउट गर्छौं, लकडाउनपछि गाह्रो नहोला भन्ने सोचेका थिए । तर समय बित्दै जाँदा उनीहरुलाई घरमै अभ्यास गरिरहन पनि अल्छी लाग्न थाल्यो, शारीरिक परिश्रम नभएपछि तौल बढ्न थाल्यो । घरमा मात्र दौडेर उफ्रेर शरीर मर्काएर अब हुने छैन भन्ने उनीहरुलाई लाग्न थालेको छ । अहिले धेरै खेलाडीमा निराशा छाएको छ ।
लकडाउनको दुई महिना पूरा हुँदा अहिले सबैको चासो छ लकडाउनबाट कहिले छुटकारा पाइने हो ? अनि कहिले ट्रेनिङ गर्न पाउने र कहिलेदेखि पुरानै शैलीमा खेल्न पाउने हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
लकडाउनले खेलाडीको फिटनेसमा त फरक पर्ने पक्का पक्की छ । अब लामो समयसम्म दूरी कायम गर्नुपर्ने प्रोटोकलहरु बन्लान्, खेलको नियममै समेत परिवर्तन होला ।
गत शनिबार मात्रै जर्मनीमा शीर्ष डिभिजनको फुटबल बुण्डेसलिगा फेरि सुरु भएको छ । दर्शकविनाका मैदानमा खेलिन्छ । हात मिलाइँदैन । कुनै सेलेब्रेसन छैन मैदानमा थुक्न पाईंदैन । मैदानबाहिर निस्केपछि मास्क अनिवार्य छ । बेन्चमा दूरी कायम गरेर बस्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्य खेल जस्तै क्रिकेट पनि क्लोज डोरमा दर्शक बिना आयोजना गर्नेबारे छलफल हुन थालेको छ ।
जर्मनीमा सुरु भएको बुण्डेसलिगामा २६ औं चरणका ९ खेल हुँदा ८ खेलाडी घाइते भए । अझ उनीहरुले खेलअघि केही दिन सामाजिक दुरी कायम गरेरै भए पनि प्रशिक्षण गरेका थिए ।
सुविधा सम्पन्न देशमा समेत खेलाडीको अवस्था त्यस्तो छ भने नेपालमा अहिले खेलाडीहरु के गर्दैछन्, कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने समेत यकीन छैन । विभागीय क्लबका खेलाडीले वर्षैभरी प्रशिक्षण गर्ने भएकोले फिटनेस केही कम भएको होला अरु खेलाडीको अवस्था कस्तो छ ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालले शुक्रबार एक कार्&#2
Tagged खेलकुद, खेलकुद प्रमुख, रंगशाला, रमेश सिलवाल, राष्ट्रिय समाचार
← क्वारेन्टाइन भद्रगोल भएको भन्दै रुपन्देहीको मर्चवारमा प्रदर्शन
कोरोना निको भएर नारायणी अस्पतालबाट ९ जना डिस्चार्ज →